🥇 Fandaharam-pivarotana entana
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 104
Lahatsary fandaharana amin'ny fivarotana entana
Manafatra programa amin'ny fivarotana entana
Fivarotana ao amin'ny magazay - karazana hetsika manokana mifandraika amin'ny fivarotana entana tena voafaritra - fananana (akanjo matetika, tsy dia matetika - kiraro, kojakoja sns.), Tavela amin'ny tahiry. Ny kaonty dia mazàna mitaky ny fitazonana ny karazana firaketana rehetra amin'ny ampahany betsaka amin'ny firaketana sy ny varotra. Ny fomba azo itokisana sy mora indrindra hanatanterahana ny programa fivarotana dia programa amin'ny fivarotana entana. Ny programa tsirairay amin'ny fivarotana entana dia natao handaminana ny asan'ny orinasam-barotra, hanafainganana ny fizotran'ny fikirakirana angon-drakitra sy ny rafitra ary hanatsara ny fizotran'ny asa (indrindra ny asan'ny sampana fivarotana). Ny mpitantana sasany, mihevitra fa nahita fomba mora kokoa hividianana programa amin'ny fivarotana entana izy ireo, dia manapa-kevitra ny hisintona ny programa amin'ny fivarotana entana an-tserasera amin'ny fangatahana ny programa fangatahana tranokala fikarohana hivarotra entana maimaim-poana na programa hivarotana fampidinana entana maimaimpoana. Tokony hazavaina fa io fomba fiasa io dia diso tanteraka ary tsy vitan'ny manimba ny fahatokisanao ireo programa fitantanana kaonty mandeha ho azy, fa mitarika fahaverezan'ny fampahalalana ihany koa. Ny zava-misy dia tsy ny mpandahatra fandaharana rehetra no hikarakara ny fikojakojana programa maimaimpoana amin'ny fivarotana hifehezana ny fivarotana entana (ary raha izany dia tsy misy fanentanana toy ny vola), ary io filana fanampiana ara-teknika io na ho ela na ho haingana dia azo antoka miseho. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny manam-pahaizana rehetra dia tsy manome soso-kevitra afa-tsy amin'ny fivarotana novidina avy amina mpandrindra azo antoka.
Ny programa azo antoka indrindra amin'ny fivarotana entona sy fanaraha-maso fitehirizana - ny USU-Soft. Ity programa hivarotana entana ity dia manana tombony betsaka noho ireo analogy ary afaka mampiseho ny vokatra tsara indrindra haingana dia haingana. Izy io dia miavaka amin'ny kalitaon'ny fanatanterahana avo lenta, ny fampiasana azy mora foana, ny teti-bola mahafinaritra ary ny programa fikojakojana marina. Ireo mpamorona ny USU-Soft dia manana mariky ny fahatokisan-tena iraisam-pirenena D-U-N-S, izay manamafy ny fanekena an'ity programa fivarotana fitantanana entana manerana an'izao tontolo izao ity ho iray amin'ireo vokatra avo lenta indrindra amin'ny fivarotana entana. Ny programa fivarotana fitantanana entana izay manampy anao hanamora ny fivarotana entam-barotra dia mamela anao hampiasa fitaovana mahazatra ihany ao amin'ny magazay (fitaovam-pivarotana sy trano fanatobiana entana - scanner barcode, mpanonta tapakila, marika, sns.), Fa fitaovana vaovao tanteraka, izay tsy mbola voafehin'ny magazay rehetra - terminal terminal d'exploitation moderne (DCT). Ity dia fitaovana kely mifangaro, izay entin'ilay mpiasa fotsiny ao am-paosiny sy ampiasana azy araka izay ilaina. Ohatra iray: raha mitarika fanisana dia ampiasainao izany ary manangona fotoana be dia be ianao. Novakiana ny data ary avy eo nafindra tao amin'ny tahiry lehibe. Ny fitaovana dia afaka mitahiry angon-drakitra maromaro, izay ampiana lehibe kokoa. Noho izany, na dia be loatra aza ny entana ao anaty trano fitehirizana, azonao ampidirina ao anaty tahiry avokoa izy rehetra ary tsy manam-petra ny fitehirizana ny rafitra fivarotana kaonty.
Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjifa ihany koa dia mendrika ny fijerena manokana. Ny fampahalalana momba ny mpanjifa dia azo ampidirina mivantana eo amin'ny latabatra vola. Ohatra, ampidirinao ao amin'ny rafitry ny kaonty amin'ny fivarotana sy ny fitantanana ny baiko ny anarana, ny anaram-bosotra, ny anarana patronika an'ny mpanjifa, ary koa ny taonany, raha tiana, ny safidiny sns. Ny mpanjifa tsirairay dia omena bonus isaky ny fividianana. Mihevitra izahay fa tsy misy antony tokony hanazavana ny atao hoe rafitra bonus, satria efa hatramin'ny ela ny fivarotana rehetra no mampiasa an'ity paikady hisarihana sy hitazomana ny mpanjifa ity. Vitsy ny olona afaka manohitra ny fahafaha-mampiasa ireo bonus nangonina ireo fa tsy vola ary mividy entana bebe kokoa ao amin'ny magazinao. Ho hitanao hoe iza amin'ireo fividianana ny mpanjifa no mividy sy mahazo bonus. Amin'izay dia ho azonao ny zavatra tiany ary amin'izay dia mandefa dokambarotra ianao ary manolo-tena hividy zavatra hafa, mandrisika azy handany bebe kokoa. Ireo mpividy dia azo zaraina amin'ny sokajy ihany koa mba hahamora ny fitetezana amin'ny alàlan'ny tahiry goavambe izay manana vaovao momba ny mpanjifa marobe. Ny fitantanana ny mpanjifa no ilaina amin'ny fikambanana orinasa.
Ity fizarana ity dia azo ianteherana amin'ny fepetra samihafa: miankina amin'ny isan'ny fitsidihana (amin'ny mpanjifa mahazatra sy tsy fahita firy); mifototra amin'ny fisian na tsy fisian'ny fitarainana (amin'ireo izay tsy mitaraina velively sy ireo izay manao izany matetika); mifototra amin'ny fividianana sasany, amin'ny taona, amin'ny arabe onenana, sns. Ny mpanjifa sasany aza mendrika homena ny satan'ny VIP sy ny tombontsoa rehetra tokony homena azy ireo. Ary raha te hifandray hatrany amin'ny mpanjifanao dia afaka mampiasa fomba fifandraisana 4 ianao - Viber, SMS, mailaka ary koa fiantsoana feo. Azonao atao ny mandefa doka, katalaogna, tolotra manokana, fihenam-bidy, na manasa hetsika, miarahaba anao amin'ny fialantsasatra, misaotra tamin'ny fividianana, mampahafantatra momba ny fahatongavan'ireo entana vaovao sy maro hafa.
Te hisoroka ny lesoka ve ianao rehefa miasa amin'ny vokatra sy ny varotra? Te hamindra ny sasany amin'ireo sanganasa monotona amin'ny masinina afaka mitantana tsara kokoa sy haingana kokoa ve ianao? Te hanatsara ny orinasanao ve ianao ka ho taraiky lavitra ny mpifaninana aminao? Avy eo aza misalasala misafidy ny programa fivarotana mifehy sy mandeha ho azy. Miantoka izany rehetra izany izahay, ary bebe kokoa aza. Zatra gaga ny mpanjifanay izahay. Ao amin'ny tranokalanay ofisialy no ahitanao ny fampahalalana ilainao, ary afaka misintona kinova demo maimaimpoana hametrahana azy ao amin'ny orinasanao ary hizaha raha marina na tsia ny zavatra rehetra lazainay aminao. Azontsika atao ny manome toky anao fa ny rafitra tsy manam-paharoa momba ny automatisation sy ny modernisation modernisation dia tsy handiso fanantenana anao ary tena maniry ny hanohy hampiasa azy io ianao! Mifandraisa aminay amin'ny fomba tianao rehetra. Mifandray foana izahay ary faly hamaly ny fanontanianao rehetra.